Iyo Apple Watch Series 4 ine yakawanda uye zvirinani skrini pakupera kwegore | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch Series 4 ine yakawanda uye zvirinani skrini pakupera kwegore
Isu tanga tichiona ruzivo rwechazove chinotevera Apple Watch Series 4 kwemazuva uye izvi zvinogona kusvika pakupera kwegore rino neyakavandudzwa skrini munzira dzese. Kune akateedzana eanonakidza makuhwa anobuda mune izvi uye ndeyekuti iyo itsva MicroLED inoratidzira pamwe chete nechiratidziro chine mashoma mafuremu ndiwo chikamu chikuru cheizvi.
Runyerekupe rwazvino runoti TSMC inozopedzisira yave kutonga kusimudzira nekubatsira kugadzira iwo maratidziro eMicroled avanogona kushandisa kumidziyo mitsva yechiuno Rudzi rwechidzitiro runodhura zvikuru kugadzira kupfuura epaneru eOLED, asi pasina kupokana ipa kuita kuri nani maererano nesimba rekushandisa, ukobvu uyezve kuwedzera kupenya.
Apple Watch Series 4 ine MicroLED
Ratidza tekinoroji kufambira mberi uye mushure menguva iyo Apple iri kushandisa OLED skrini kune ayo mawachi, zvinokwanisika kuti gore rino isu tichava vatori vechikamu cheinotevera nhanho, iyo mitsva skrini. Ichokwadi kuti izvi zvidzitiro zveMicroled zviri pamusoro pe500% zvinodhura kupfuura maOLED aripo, asi iwo anokosha zvechokwadi uye ndosaka Apple ichizenge ichibheja pavari.
Uye zvakare, Apple ine sarudzo yekudzora furemu yemawachi uye nekusiya kwekunze dhizaini yebhokisi, zvichizadzisa zvinangwa zviviri zvekutanga: ramba uchitengesa tambo imwechete uye zvishongedzo zveazvino 38 uye 42mm wachi, pamwe nekuwedzera pakuonekwa -chiso. Zvine musoro kuti isu hatisi kutarisana neshanduko huru kune vashandisi vanozoramba vachinakidzwa nemhando dzazvino zvakafanana uye vashandisi vatsva vanozove nechimwezve chikonzero chekutanga mukutenga.
Vamwe vaongorori vanotoshinga kupa zviyero zvesikirini size uye Ming-Chi Kuo kana Ben Geskin ndivo vari kuisa mafuta akawanda mumoto nezvakafanotaurwa. A 15% yakakura skrini, mamwe masisitimu ane hukama nehutano uye pachena kuzvitonga kuzere, ndidzo shanduko huru dzinooneswa nevaongorori ava.
Tichanyatso tevera shanduko idzi dzinogona kuitika uye tione kana maApple matsva emhando dzeMicrosoft ane MicroLED skrini inonyatsosvika pakupera kwegore rino, zviri pachena ndezvekuti mhando dzazvino dzichiri sarudzo yakanaka kwazvo (kana isiri yakanakisa) kune vese avo vane iPhone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch Series 4 ine yakawanda uye zvirinani skrini pakupera kwegore
Ramon Ibañez Alonso akadaro
Ini neangu akateedzana 0 uye zvinoenda zvakanaka. Kumirira akateedzana 4.
Pindura kuna Ramon Ibañez Alonso
Beta yekutanga yeruzhinji yeTVOS 11.4 yave kuwanikwa
Intel inozivisa iyo Core i9, pamwe iyo Mac Pro Chip